Ireo boobs ao an-tanàna dia mankalaza ny tsingerintaona faha-2 taonany amin'ny alàlan'ny fanomezana sy loka maro | Androidsis
DaniPlay | 13/08/2021 08:03 | Lalao Android
Nihatsara ny fiainana ny lalao nandritra ny volana maro. Tamin'ny tsingerintaona faha-XNUMX taonany, nanjary lohateny hentai malaza be i Boobs ao The City miaraka amina mpilalao efa ho 6 tapitrisa, tarehimarika efa hanatratra ity lalao video noforonin'ny developer Super H. ity
Ny fivoaran'ny Boobs in The City dia nateraka tamin'ny hevitra hamoronana lalao hentai tsy mitovy amin'ny ambiny, mahaliana sy mavitrika, mifototra amin'ny sary 3D. Ny ankamaroan'ny anaram-boninahitra dia mifototra amin'ny 2D, ny filalaovana dia nilalao lafin-javatra lehibe, ka talohan'ny nandefasana azy dia nosedrain'ny vondron'olona iray.
1 Tsingerintaona faharoa
2 Vondron'olona lehibe ao ambadiky
3 Miteraka laza eo amin'ny tamba-jotra sosialy
4 Bonus ho an'ny mpiara-monina
5 Gameplay sy tanjona
7 Data sy isa
Boobs ao an-tanàna mankalaza roa taona mahatratra ny isan'ny mpilalao 6 tapitrisa, ny hevitra dia mitohy hitombo mandritra ny volana vitsivitsy. Mampivelatra izany izy nefa tsy mitsahatra manampy zavatra hitazomana ny fiaraha-monina, ilay iray izay mbola ampahany manandanja amin'ny lohateny Hentai.
Ireo roa taona ireo dia nahita ny fandrosoana lehibe, na tamin'ny sehatry ny sary, fa tamin'ny fanasongadinana ambonin'izany rehetra izany dia ny filalaovana zava-misy, na efa elaela ianao na niditra ho mpilalao vaovao. Boobs ao amin'ny tanànan'ny THe City dia hitohy amin'ny laharan'ny fitomboana ary manantena ny handresy ireo mpilalao milalao ity Hentai mampiala voly ity.
Vondron'olona lehibe ao ambadiky
Ireo mpilalao efa ho 6 tapitrisa ireo dia mahatonga an'i Boobs ao an-tanàna ho lalao video ho an'ny Android tonga lafatra hilalao azy amin'ny fotoana rehetra, na irery na miaraka amin'ny hafa. Zava-dehibe ny vondrom-piarahamonina, hany ka henoina izy io, io no manana betsaka holazaina amin'ny farany hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
Ankoatra ireo rehetra ireo, Boobs ao The City dia manana tantara mety sy feno, miaraka amin'ny rafitra bonus handrisihana ny mpilalao hiezaka mafy kokoa. Ny valisoa dia fitaovana tonga lafatra hitazomana anao hifandray amin'ny ampahany lehibe amin'ireo mpampiasa izay manohy milalao azy io efa ho 24 volana izao.
Mampody azy ireo ny mpilalao hanatsara hatrany ny Boobs ao The City miaraka amin'ny fanavaozana, manan-danja noho ny fanohizana ny fanomezana vaovao amin'ity lalao ity. Ny fanombanana ataon'ny vondrom-piarahamonina dia tsara, miaraka amin'ny naoty avo lenta azon'ireo nanandrana sy nijanona.
Miteraka laza eo amin'ny tamba-jotra sosialy
Ny boobs ao an-tanàna dia mamorona fanehoan-kevitra maro hafa noho ny influencers, miaraka amina lahatsoratra maherin'ny 200 ao amin'ny Instagram, noho ny tenifototra rehetra #boobsinthecity. Ilaina ny laza mba hiteraka fifamoivoizana amin'ny tambajotra sosialy, amin'izay hiteraka fidirana amin'ny fijerena bebe kokoa.
Twitter koa dia iray amin'ireo tambajotra sosialy izay ahazoan'ny Boobs ao an-tanàna fahefana tsikelikely, satria ny fizarana dia mizara indraindray ny mpampiasa. Na eo aza izany dia ao amin'ny Instagram izay nozaraina bebe kokoa, tena zava-dehibe satria tambajotra misy mpampiasa mihoatra ny 1.000 tapitrisa.
Bonus ho an'ny mpiara-monina
Super H sy Erogames dia miahy fatratra ny fiarahamonin'izy ireo, izany no antony ahazoana ireo tombony anaty, toy ny hoe nanome fiainana be dia be izy ireo ary manohy mankafy an'ity titre ity amin'ny fitaovana Android. Ilaina izany mba hahafahanao manohy misarika mpilalao vaovao hiditra ao amin'ity taona ity.
Te hamoaka lobaka vaovao miaraka amin'ilay angano "Boobs in The City" ny mpamorona, hanome fiainana ny Tsingerintaona amin'ny fisarihana loka, ny 50 voalohany homena valisoa: T-shirt Boobs in The City sy kitapo iray miaraka amin'ny fanomezana avy amin'i Erogames.
Mba hidirana amin'ity raffle ity dia mila miditra amin'ny lalao ianao, alaivo ny T-shirt Boobs ao amin'ny The City ary manana fotoana mety ho iray amin'ireo 50 tsara vintana. Fanomezana mahaliana izy io, indrindra amin'ny fananana ampahany amin'ny varotra azy, mety hanaovana azy amin'ny vanim-potoana rehetra, na fahavaratra na ririnina.
Gameplay sy tanjona
Lohateny tsotra sy mandaitra izy io, ny ankihibe roa ihany no ampiasainao mba hilalao azy, iray ny mihetsika ary ny iray mikendry / mitifitra. Minitra vitsy monja dia ho azontsika ny zavatra rehetra tokony hataontsika mandritra ny 50 ora mahery amin'ny lalao, fa tsy manam-petra noho ny safidiny marobe.
Ny lalao dia tsy maintsy lalaovina amin'ny maody multiplayer 3 vs 3, manan-danja ny gadona satria eo afovoany izy io, mety ho an'ireo izay liana amin'ny lohateny Hentai. Homena valisoa amin'ny vola sy fanomezana ianao amin'ny lalao rehetra, miaraka amin'ity dia ho afaka hamaha zavatra samihafa ianao.
Ny lalao dia mamela anao hiditra amin'ny fitaovana vaovao ao amin'ny magazay, akanjo vaovao, mpikambana vaovao, fotoam-panofanana vaovao ary maro hafa. Mitadiava ny lohateny MVP, miadia ny fandresena, noho izany dia mila manafoana ny mpifaninana tsirairay amin'ity lalao video mahafinaritra ity ianao.
Ny lalao dia mifototra amin'ny ankizivavy mitifitra rano amin'ny bikini, avy eo handeha ho any amin'ny efitrano fatoriany izy ireo. Lohateny natao ho an'ny olon-dehibe izy io. Fantaro ny mpikambana tsirairay, fantaro ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny tantara an-tsary izay tena hotarihin'ny ekipa mpamolavola.
Zava-dehibe ny fotoam-pampiofanana, indrindra raha te hanatsara ny toetran'ny zazavavy tsirairay ianao, miankina amin'ny aces rehetra. Mila manokana fotoana vitsivitsy ianao amin'ny fampiofanana raha te-handoko tsirairayAraraoty àry ny fotoana raha tianao ny ho tonga amin'ny tsara indrindra amin'ny ady mitifitra basy.
Data sy isa
Zazavavy 9, samy manana ny tantarany avy
Tantara 6 isan-karazany isaky ny zazavavy, ao anatin'izany ny tantara Hentai 2
Fanafihana 3 isaky ny zazavavy sy fahaiza-manao maro samihafa, ao anatin'izany ny fanasitranana, ny fanafihana na ny fiarovana
Akanjo 50 mahery samy hafa hitafy ny tsirairay amin'ireo zazavavy 9
Valisoa maro isan'andro, na amin'ny fifandraisana na amin'ny famitana ny iraka
Mankanisa mpilalao 6 tapitrisa manerantany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Boobs ao an-tanàna mankalaza ny faha-2 taonany
Cubot MAX3 vaovao misy efijery efa ho 7 santimetatra. Makà iray maimaim-poana (Giveaway)